Wasaaradda arrimaha gudaha oo madaxda maamul goboleedyada uga digtay mudo kororsi - Halbeeg News
Wasaaradda arrimaha gudaha oo madaxda maamul goboleedyada uga digtay mudo kororsi
MUQDISHO(HALBEEG)- War saxaafadeed ay soo saartay wasaaradda arrimaha gudaha federaaleynta iyo dib u heshiisiinta xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa loogu baaqay madaxda maamul goboleedyada in ay ilaaliyaan dastuurka si looga fogaado in madaxda maamul goboleedyada ee uu muddo xileedkoodu dhamaaday in ay sameeyaan muddo kororsi.
“Wasaaraddu waxay adkaynaysaa in la ixtiraamo ku dhaqanka dastuurka lana ilaaliyo muddada xil haynta iyadoo la xaqiijinayo in ay doorashooyinku qabsoomaan waqtigii loo asteeyay si looga fogaado tallaabo kasta oo keeni karta muddo kororsi” ayaa lagu yiri warsaxafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha.
Warsaxafadeedkan oo ay soo saartay wasaaradda arrimaha gudaha ayaa lagu sheegay in wasaaradda ay diyaar u tahay in maamul goboleedyada ay ku gacan siiso qabsoomida doorashooyinka ku soo fool leh, si ay u noqdaan kuwa daah furan xor ah, waafaqsanna dastuurka dalka.
“Wasaaradda arrimaha gudaha waxay gacan ku siin doontaa dhammaan Dowlad goboleedyada sidii loo hirgelin lahaa doorashooyinka kusoo food leh oo aan rajaynayno in ay u dhacaan si daah furan, xor ah, waafaqsanna dastuurka dalka” ayaa lagu yiri warsaxafadeedka.
Hogaanka dowlad goboleedka Galmudug ayay wasaaradda arrimaha gudaha ugu baaqday inay soo afjaran Isfahan waaga soo kala dhax galay, islamarkaana ay dib ugu soo laabtan dhaqangelinta heshiiskii lagu saxiixay Villa Soomaaliya tariikhadu markay aheyd 6/12/2017-kii, lana meel mariyo dhammaan qodobadii ku cadda heshiiskaasi.
Dad badan oo ku dhintay daadad ku dhuftay dalka Nigeriya